कानेपोखरीको केहि विकट बस्तीमा सडक र झोलुङ्गे पुलले जोड्दै । -
४।माघ , कानेपोखरी ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नंं ६, दहिधाप उत्तर विकट बस्तीलाई सडक र झोलुङ्गे पुलले जोड्ने भएको छ । गाउँपालिकाको अती विकटको रुपमा रहेको सो ठाउँमा यस पटक सडक र झोलुङ्गे पुल निर्माण सँगै भुल्के सिमसारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास स्थानीय सरकारले गर्ने भएपछि त्यस ठाउँले राम्रो स्थान पाउने भएका छन् ।
सो स्थानमा शनिबार कानेपोखरी र पथरीशनिश्चरे पालिका जोड्ने १८४ मिटरको लम्बाईको झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमती इङ्नाम, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यामुना विष्ट बास्तोला, पथरीशनिश्चरे वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष भानु राई, कानेपोखरी ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेत,नेकपा कानेपोखरी गाउँ कमिटि अध्यक्ष भोला अधिकारी, दानबहादुर बस्नेत लगायतले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
सो पुल २०७८ सालको मागमा सम्पन्न गर्ने गरी अनसुभी कन्ट्रक्सनले १ करोड ३६ लाखमा ठेक्का पाएको छ । पुल निर्माणका लागि स्थानीय बलबहादुर राईले जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । यस ठाउँका मानिसहरु हाट बजार, पढ्नको लागि विद्यालय डाँस खोला तरेर पथरीशनिश्चरे जाने गरेका छन् । त्यहाँका स्थानीयहरु ३ किलोमिटर जंगलको बाटो भएर कानेपोखरी र पथरीबजार निस्कनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अव झोलुङ्गे पुल बनेपछि त्यो समस्याहरु सबै समाधान हुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामले बताइन् । सो स्थान र त्यहाँ देखी माथी सिताधापमा विजुली बत्ती बलेको पनि भखरै हो । कार्यक्रममा बोल्दै कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले देशमा संघियता आएपछि वडाको कुना कुनामा विकास गती तिव्ररुमा भइरहेको बताएका छन् ।
गाउँका कुना कुनाका तीन वटै सरकार पुगेको उनले बताए । अध्यक्ष काफ्लेले दुई पालिका जोड्ने यो झोलुङ्गे पुलले आवगमन मात्र होइन स्थानीयको जीवन स्तरमा पनि परिवर्तन आउने बताए । विहिबारे–निर्माणधिन झोलुङ्गेपुल पुग्ने सडक स्तरोन्नतीको लागि संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रि भानुभक्त ढकालको क्षेत्र विकास कोषबाट १० लाख यसै आर्थिक बर्षमा सडकको काम सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिर्दै छेउमै रहेको भुल्के सिमसार पर्यटन विकासको लागि तत्काल डिपिआर गर्ने बताए ।
यस बर्ष संघिय सरकारले पर्यटन शिर्षकमा भुल्के सिमसारलाई ५ लाख रुपैया पठाएको र त्यसले सिमसारको विकास गर्ने अध्यक्ष काफ्लेले बताए । उनले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने तयारीमा रहेको बताए । डाँस खोलामा त्यसदेखी दक्षिण दुईवटा पक्की पुल निर्माणधिन अवस्थामा छ भने दुई वटा झोलुङ्गे पुल बनिसकेको छ । कार्यक्रममा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यामुना विष्ट बास्तोला,पथरीशनिश्चरे वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष भानु राई, नेकपा कानेपोखरी गाउँ कमिटि अध्यक्ष भोला अधिकारी, दानबहादुर बस्नेत लगायत अतिथि रहेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रमका सभाअध्यक्ष वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष खड्ग बस्नेत रहेका थिए भने कार्यक्रम संचालन वडा सदस्य त्रिभूनाथ नेपालले गरेका थिए ।
आदर्श सीता आधारभूत विद्यालयका ४० जना विद्यार्थीले पाए टिफिन बट्टा ।